LG G6 မှာရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူတို့ဟာငါတို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ် Androidsis
LG G6 မှာရှိပြီးသားဖြစ်တာမို့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူတို့ကငါတို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ခန့်က MWC17 တွင်ပထမဆုံးသောအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုမှာဘာစီလိုနာတွင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၎င်း၏ခရီးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ LG ကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ တူညီတဲ့ပမာဏကဘာလဲ၊ LG G6 မှာရှိပြီးသား.
လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ခန့်က MWC5 တွင် LG G16 နှင့်ပြသခဲ့သည့်ဆိုးရွားသည့်တင်ဆက်မှုအပြီးတွင် LG သည် LG G6 အသစ်ဖြင့်အသားများအားလုံးကင်မရာထဲသို့လွှင့်ပစ်တော့မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ကြပြီးအမှန်မှာ၊ အတူလှပသော terminal ကိုနှင့်ငါတို့ကိုတင်ပြကြသူကိုတစ်ချက် Terminal ၏မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနီးပါးကို rounded finices ဖြင့်သိမ်းပိုက်နိုင်သည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်သော screen ဒါကပထမတစ်ချက်မှာငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အဲဒါကိုမျက်လုံးအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေတယ်။
ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်အချို့ထည့်ပါ ၎င်း၏ဆားတန်ဖိုးရှိ high-end ခံထိုက်သောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ကြယ်ဆိပ်ကမ်းများအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်သောဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပြင်းထန်သောနည်းဖြင့်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် LG သည် LG ၏စာရင်းများတွင်ထပ်မံမြှင့်တင်လိမ့်မည် ယခုနှစ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများ
LG G6 ၏နည်းပညာအပြည့်အစုံ
အမှတ် LG Electronics ၏
ပုံစံ LG က G6
operating system LG UX7.0 စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android6Nougat
ဖန်သားပြင် Dolby Vision HDR2880 နည်းပညာဖြင့် 1440 "Quad HD + 5.7 × 10 px မျက်နှာပြင်
Processor ကို 821 Ghz တွင် Qualcomm Snapdragon 2.35 Quad Core
GPU ကို 530 Mhz မှ Adreno 650
ရမ်4Gb LPDDR4
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32 / 64Gb မော်ဒယ်များသည် MicroSd အထိ 2Tb အထိထောက်ပံ့သည်
နောက်ကင်မရာ Dual 13 Mpx Camera ၁၂၅ ºအကျယ်ထောင့်ရှိ
ရှေ့ကင်မရာ 5ºကျယ်ပြန့်သောထောင့်နှင့်အတူ 100 Mpx
အခြားအင်္ဂါရပ်များ ရေခံနိုင်မှု - နောက်ကျောတွင်လက်ဗွေဖတ်စနစ်နှင့် Googe Assistant ကိုစံအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ရရှိနိုင်သည့်အရောင်များ Platinum Mystic White နှင့် Astral Black
ဘက်ထရီ 3300 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 148.9 × 71.9 မီလီမီတာ× 7.9
အလေးချိန် 163 ဂရမ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသက်သေပြနိုင်ခြင်းနှင့်သင့်အားစိတ်ရင်းမှန်နှင့်တိကျမှန်ကန်သောထင်မြင်ချက်များကိုပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည် LG G2, LG G3 နှင့် LG G4 တို့ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်သည်။ LG G6 ဟာဒီတစ်ချက်ကဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ LG ကိုပြန်သွားချင်တယ် အကယ်၍ အားလုံးသည်အစီအစဉ်အရသွားလျှင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံကို LG G2 သို့မဟုတ် LG G3 ကဲ့သို့ရောင်းအားအောင်မြင်ရန်ပြန်လာလိမ့်မည်
terminal ကိုမူကား၊ ငါတို့ကိုကြည့်ရှုရန်ပထမ ဦး ဆုံးအရာက၎င်း၏ eအံ့သြဖွယ် 5,7″ QuadHD + မျက်နှာပြင် ရှေ့ပိုင်းတွင်၎င်းအချိုးအစားသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုထားသည် ၁၈: ၉ အချိုးနှင့် Full Vision နည်းပညာ အမှန်တရားကမင်းကိုကြိုးစားပြီးလက်တွဲချင်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ LG G5 ကိုကျွန်တော်မထုတ်ယူခင်အထိငါ LG ကိုသစ္စာရှိရှိအသုံးပြုခဲ့တယ် ဒီ LG G6 လိုပဲ option တစ်ခုပါ နောက်ကျောမှာလက်ဗွေစာဖတ်သူကိုထား၏LG terminals ၏ဒီဇိုင်းကိုယခုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောကြောင့်ယုတ္တိရှိသောအရာသည်၎င်း၏ Android တွင် virtual Android navigation ခလုတ်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်ခလုတ်မျှမပါ ၀ င်ပါ။
ဒီဟာကငါအတွက်ကြီးမားတဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အဆင်မပြေမှုဖြစ်တယ်လို့ငါဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။ ငါ terminal ကိုလက်နဲ့ကိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကိုလက်နဲ့ယူမယ်ဆိုလျှင်သော့ဖွင့်ဖို့ကတည်းကငါသိပ်အသုံးမ ၀ င်ဘူး၊ နောက်တစ်ကြိမ် အလူမီနီယံနှင့်ဖန်ခွက်ကိုယ်ထည်များတပ်ဆင်ထားသောလှပသော Android terminal နှင့်၎င်း၏ LG G5 တွင်အရင်ကပျောက်ဆုံးခဲ့သော Premium style.
ဒီပစ္စည်းရဲ့ရောင်းရငွေနဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားကတော့ LG G6 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အပြီးသတ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘာကိုမှအကြောင်းကြားခြင်းမရှိသေးပါ။ ၎င်း၏ 700 Gb ဗားရှင်းအတွက် 32 ယူရို သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့်မပိုရ ၎င်း၏ 900 Gb ဗားရှင်းအတွက် 64 ယူရို ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း။
ထိုအခါငါကသင်စွန့်ခွာ LG ကသူ့ရဲ့ LG G6 အတွက်တရားဝင်ဖြန့်ချိလိုက်တဲ့တရားဝင်ဗီဒီယိုဗီဒီယို အထူးသဖြင့်ကင်မရာများဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်သည့်အပြင်ရေဒီယိုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကဲ့သို့သော terminal ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများအပြင် LG terminal တွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်ယူနစ်တစ်ခုကိုရနိုင်ပြီဆိုပါကသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ရင်းမှန်ဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုသင်ပထမဆုံးသိလိမ့်မည်ဟုသံသယမဝင်ပါနှင့်။LG ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဘို့အခေါ်ခံရဖို့လာသူကို erminal.
ယခုငါတို့စောင့်ရလိမ့်မည် မနက်ဖြန်ငါတို့ကဖမ်းနိုင်ပြီးဘာစီလိုနာရှိ MWC17 မှတိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်သည် အများပြည်သူတက်ရောက်ရန်အခမ်းအနား၏ဖွင့်ပွဲနှင့်တရားဝင်ဖွင့်ပွဲတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G6 မှာရှိပြီးသားဖြစ်တာမို့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူတို့ကငါတို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်
နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် Huawei P10 နှင့် P10 Plus တို့၏စျေးနှုန်းများ
Android မွာ Pixel ၏မျက်နှာပြင်ခလုတ်များကို root မပါဘဲရယူပါ